Xisbiga HorCad oo jawaab baxshay 8 Dec 8, 2012 - 10:41:12 AM
Afhayeenka ururka Horumarka iyo cadaalada [ Horcad] Axmad Yasiin iyo Cumar Ismaaciil Waaberi oo kamid ah aasaasayaasha ururka siyaasadeedkaan ayaa jawaab culus ka baxshay hadal kasoo yeertay Cabdulahi Siciid Samatar.
Cumar Ismaaciil Waabari oo kamid ah aasaayaashii urur siyaasadeedkaan oo shir saxaafadeed galabta ku qabtey magaalada Bosaso ayaa jawaab kulul ka baxshay hadal dhowaan kasoo yeeray Cabdulahi Siciid Samatar oo soo gaarey Puntland.
Samatar oo shir saxaafadeed ku qabtey aqalkiisa markii uu soo gaarey Bosaso Khamiistii la soo dhaafey ayaa sheegey in ururka Hurumarka iyo Cadaalada uu yahay mid gacan ku rimis ah islamarkaana aan sax aheyn in dhidibada loo aaso.
Cumar Ismaaciil Waaberi oo la hadlaya saxaafada ayaa ku tilmaamey hadalka Mr.Samatar mid meel ka dhac ah islamarkaana ay tahay inuu raali galin ka baxsho.
Puntland oo ku talaabsatey nidaamka xisbiyada badan ayaa waxaa maalmahaan ka bilowdey urur siyaasadeedyo looga dhawaaqayo kuwaasoo raba iney ka qayb qataan talada dalka.